U.S.A – Clinic – Thet Nandar
Category: U.S.A – Clinic
ဆေးရုံ မသွားခင် အိမ်မှာ … 1, 2,3လက်ချောင်းထောင်ပြနေတာ … Peace for All …. Peace …. အချိန်နဲ့ အတူ တနေ့တခြား ကြီးလာသော သားသား … အအေးဗူးလည်း ကြိုက်တယ်။ အပြင်သွားရင်း ကားပေါ်မှာ သောက်ဖို့ ကိုယ်တိုင် သယ်နေသော သားသား … ကွန်နက်တီကတ် … ကလေး ဆေးရုံမှ ကလေး ဆေးကုခန်း … အခန်းတွေက အများကြီးပဲ။ ကလေး တစ်ဦးကို တစ်ခန်းစီ … ကလေး နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဆရာဝန် တစ်ဦးစီ … ကလေးဆေးရုံမှ ပန်းချီကား သားသားကို ဆရာဝန် ပြဖို့ အဖော်လိုက်လာပေးသော […]
Read More ကလေး ဆေးရုံ